Odisha Tribal Tour-Tribes Village Tour India. Ka wac + 91-993.702-7574
Turjubaanka Qabiilka Orica
Ma ogtahay, 29% dadka reer Odisha waa qabiil? Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka, oo jecel inay la kulmaan dadka cusub iyo helitaanka dhaqammo cusub, Sandbirdhiga 'Sandy Catches' Tourist Tribal waa doorashadaada tagitaanka. Iyadoo qabiilada kala duwan ee 62 si ay u sahamiyaan, booqashada qabiilka Odisha waxay diiradda saaraan caadooyinka da'da ah, dhaqanka asaliga ah iyo tuulooyinka qabaa'ilka. U samee safar aan suurtagal ahayn in goobaha qabaa'ilka, oo leh Odisha Tribal Tour, oo ay bixiso Sand Pebbles oo leh aragti u dhow bulshada iyo caadooyinka dheeriga ah. Qaadashada fiidkii, sida dadka qabiillada ah ee dhedigga ah ee Dhemsa ay noqon karaan waayo-aragnimo nololeed oo dhab ah. Waxa kale oo aad ku raaxeysan kartaa suuqyada toddobaadlaha ah ee magaalooyinka qabaa'ilka oo leh tartannadeena tartanka Odisha.
U diyaar garoow inaad ku safartid safar, si ka baxsan fikraddaaga, waxaadna fiirisaa dhaqanka iyo dhaqanka hodanka ah ee Olanda qadiimi ah oo leh khibrad aan caadi ahayn oo aan la ilaawi karin. Ku dhiirigeliso naftaada dhibcaha oo aan ku siin doonin khibradaada safarka laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa waayo-aragnimo waxbarasho. Goobta Tribal Village Tour waxay dabiiciyan dabeecada, dabeecada, sheekooyinka dhaqanka, xafladaha, qoob-ka-cayaarka, dhaqanka, farshaxanka, gacmo-gacmeedka iyo tiknoolajiyada. Gobollada yaryar ee dadka, oo loo yaqaan qabiilada marwalba way jecel yihiin dadka caasimadda ah, iyo kuwa kale.
Sanduuqa cows'Odisha Tribal Tour waxay bixisaa Bandhigyada Dalxiiska Odisha Tribal Tour iyo Odisha Village Tour taas oo ku soo bandhigi doonta safar aad u xiiso badan.
Code Code: 002
Maalmaha 13 / 14
Imaanshada garoonka diyaaradaha ee Bhubaneshwar / Saldhiga Tareenka iyo u wareejinta hoteelka. Gelinka dambe ee booqashada dhismayaasha maxalliga ah - Lingaraja, Parsurameswar, Mukteshwar, Brahmeswara & Raja-Rani Temples. Habeenimadii beri ee Bhubaneswar.
Kadib markii quraacdu u socdaan Puri booqashada Dhauli (Shanti Stupa), Hirapur (macnaha 64 Yogini), Pipli (tuulada shaqada ee Applique & Raghurajpur). Jidka ayaa sidoo kale ku raaxeeyaa sawirada Chita-ku yaala derbiyada guryaha. Habboon habeenkii Puri.
Booqashada hore ee subixii hore Lord Jagannath Temple, Temple Gundicha iyo Temple Loknath. Booqashadda galabnimo ee booqashada Temple Sun ee Konark (oo sidoo kale loogu yeero Black Pagoda), Chandrabhaga Beach iyo tuulooyinka. Habeenka oo dhan Puri.
DAY 04: PURI - BARNAAMIJKA CHILIKA - GOPALPUR
Arbacada ka dib quraacda waxay u gudubtaa Gopalpur iyada oo loo marayo Barkul. Goobta Chilika ayaa ka muuqan doonta meel u dhow Barkul. Booqo wabiga si aad u aragto kalluumeysiga kalluumeysiga raadinaya sharraxa, mackerel iyo dabaqyo. Sii wad Gopalpur. Habeenkii Gopalpur.
Ka dib marka quraacdu u socoto Rayagada en-route booqasho geela kulul ee kuleylaha Taptapani iyo xeryaha Tibetan ee Chandragiri. Habeenimadii Rayakada.
Quraac ka dib, booqo Soura Tribal Market, ka dibna ku noqo Rayagada. Habeenimadii Rayakada.
Ka dib quraac qurxin ah oo ka socda degaanka Tumudibandha si ay u soo booqdaan Qabiilka Kutia Kondh. Inkastoo ay soo laabanayaan booqashadooda suuqa Kotgarh. Marka la eego, hadday waqtigu ogolaato, booqo Dhokra Casting iyo Mujurid Qalabka Meelaynta. Habeenimadii Rayakada.
Subaxii ka dib quraacda booqashada suuqa Dongria Kondh Tribal suuq ee Chatikona ka dibna ku wado Jeypore booqasho dhowr ah Desia Kondh iyo Mali. Habeenimadii Jeypore.
Kadib markii quraacdu u socdaan Onukudelli si ay u soo booqdaan suuqa ugu caansan ee suuqa Bonda Tribes ka dibna booqo Qabiilada Gadabas & Didayee midab leh. Habeenimadii Jeypore.
Subaxda subaxnimadu waxay markhaati ka tahay suuqyada ugu waaweeyn ee suuqyada Sanaparoja & Mali ee Kundli 65 KMs oo ku yaala Sunabeda (waa suuq aad u qurux badan). Kadibna Jeypore booqo Lord Jagannath Temple iyo Matxafka Qabiilka ee Koraput. Habeenimadii Jeypore.
Quraac ka dib, u kaxee Gupteswar si uu u booqdo Temple Shiva iyo dhawr qabiil oo Dhruba ah. Kadibna suuqa saafiga ah ee Baligaon. Habeenimadii Jeypore.
Ka dib quraac quruxsan, u kaxee Visakhapatnam. Bilaash bilaash ah xeebta. Habeenimadii Vizag.
Kadib quraac ka dib booqasho Macbadka Simhachalam. Nasashada maalintii oo bilaash ah. Habeenimadii Vizag.
Maalinta 14: DEPARTURE
Quraac ka dib, u wareeji garoonka Vizag Airport / Saldhiga Tareenka socdaalka.
Xaqiiqada :-( QIIMEYNTA 1ST APRIL - 30TH EE SEPTEMBER, LAGU HESHO XIUMXTH OCT - 26TH DEC 14 & LAMBARKA XANUMAKA LAGA HELAY 2018ST MARKAB 16)
01N-BBS, 02N PURI, 01N GOPALPUR, 03N RAYAGADA, 04N JEYPORE, 2N VIZAG
Kharashka Qof kasta Hotelka miisaaniyadda Hotel caadi ah Hudheel hotel Hoteel Hotel
02 Dadka 106500 111000 122000 138200
04 Dadka 71300 75900 86800 103000
06 Dadka 61700 62300 73300 89500
08 Dadka 67500 72300 83200 99400
10 Dadka 61300 65900 76800 93100
Qof dheeraad ah oo sariir leh 20350 25850 31350 45650
Xaqdarada :-( DHISIDA AWOODDA NGO / CBODA MAARAYNTA IYO HORUMARINTA KHAYRAADKA LACAGEED OO LOOGU TALAGALAY DEEGAANKA MAGAALADA - 1TH OCT & SOMXTH DUMARKA XAQ U LEEYAHAY 25TH JAN 15)
02 Dadka 127800 133200 146400 165800
04 Dadka 85500 91000 104000 123600
06 Dadka 74000 74700 87900 107400
08 Dadka 81000 86700 99800 119000
10 Dadka 73500 79000 92000 112000
Qof dheeraad ah oo sariir leh 24000 31000 37600 54700
Hotel si loo isticmaalo: -
Place Hotelka miisaaniyadda Hotel Hotel Hudheel hotel Hoteel Hotel
Bhubaneswar Hotel Sapphire Plaza / Sidoo kale Hotel La Franklin / Sidoo kale Hotel The Crown Mayfair Lagoon
Puri Hotel Naren Palace / Sidoo kale Empires / Pride Ananya / Sidoo kale Hans Co Co Palm / Sidoo kale Mawjooyinka Mayfair
GOPALPUR Hotel Song ee Badda Panthnivas Swosti Palm Resort Mayfair Palm Beach
RAYAGADA Sai caalami ah Sai caalami ah Sai caalami ah Sai caalami ah
FIIRO GAAR AH: -
1) Haddii qolalka aan lagu haynin hoteelada kor ku xusan, waxaan ku siin doonaa nooca la midka ah ee hoteelada.
2: Hotel Hotel Rayagada & Jeypore ma jiraan wax hudheel iyo hudheel raaxo leh. Waxaa jira kaliya heerka Standard iyo miisaaniyada AC / Qiimaha Roomka oo keliya.
Ka mid ahaanshaha: -
Gaadiidka sida barnaamijka.
Dhamaan lacagaha, baabuurta la dhigto iyo gunnooyinka darawalka.
Canshuurta dawlad-goboleedyada iyo khidmadaha oggolaanshaha
02-03 Dadka Dzire
04 Dadka Etios
06 Dadweynaha Innova
08-10 Dadka Waaweyn ee Tempo
Hal hal habeen habeenimo ah oo ku yaala magaalada Bhubaneswar quraacda
Laba habeen oo habeen ah oo ku yaala Guriga Puri ee quraacda
Hal hal habeen oo ah hoyga AC ee Gopalpur quraacda
Saddex habeen oo habeenimo ah oo ku yaala magaalada Rayagada quraacda
Afar habeen oo habeen ah oo ku yaala Jeypore oo quraac leh
Laba habeen oo habeen ah oo ku yaala Vishakhapatnam oo quraac ah
Dabbaaldegga Barkul oo ku yaal baddii Chilika
Khidmadaha taariikhiga ah ee Hindiya.
Ka reebitaan: -
Cuntooyinka waaweyn sida qadada iyo cashada.
Kharashka la xiriira shakhsi ahaan shakhsi ahaaneed
Dareemka hawada / tareenka haddii uu jiro.
Wax kasta oo aan lagu sheegin ka-qaybgalayaasha